I-bitcoin ingaba yithenda elisemthethweni e-El Salvador | Kusuka kuLinux
Okuhle | 09/06/2021 05:30 | Izaziso
Engqungqutheleni yeBitcoin 2021, UMengameli waseSalvador uNayib Bukele umemezele ukuthi ulungiselela ukuthumela umthethosivivinywa kuCongress lokho kuzokwenza iBitcoin ibe yimali esemthethweni ezweni. Uma lo mthethosivivinywa uphasiswa, izwe lizoba yizwe lokuqala ukwamukela iBitcoin njengethenda elisemthethweni.
I-El Salvador ifuna ukwethula umthetho kwenze kube yisizwe sokuqala esizimele emhlabeni ukwamukela i-bitcoin njengethenda elisemthethweni, kanye nedola laseMelika. UBukele uphakamise amandla emali edijithali ukusiza abaseSalvador ababencishwe amathuba kakhulu ukuthi bakwazi ukufinyelela ohlelweni lwezezimali olusemthethweni, basize abaseSalvador abahlala phesheya bathumele kalula imali ekhaya, futhi bavule amathuba emisebenzi.
"Ngesonto elizayo, ngizothumela umthethosivivinywa kuCongress ozokwenza ithenda yezomthetho yeBitcoin," kusho uBukele kule vidiyo efakwe engqungqutheleni yeBitcoin. Abahlaziyi bathi uBukele, oneminyaka engu-39 ophiko oludlayo olwaqala ukubusa ngo-2019, unenqwaba yezihlalo ezingama-56 kweziyi-84 selokhu anqoba ngamalengiso okhethweni lwezomthetho ngoMashi owedlule. Lokhu kusho ukuthi umthethosivivinywa kungenzeka udlule.
Umongameli waseSalvador uyaqiniseka yokwenza ithenda elisemthethweni le-bitcoinNgizoxazulula izinkinga eziningi zezomnotho nezenhlalo zezwe.
Ngokwala ma-akhawunti, ngokusebenzisa iBitcoin, inani elitholwa imindeni engaphezu kwesigidi ehola kancane lizokhuphuka ngokulingana nezigidigidi zamaRandi minyaka yonke. Lesi akusona okokuqala ukuthi i-El Salvador iqalise i-bitcoin. NgoMashi, uStrike wethule uhlelo lwayo lokukhokha lweselula lapho, olwaba ngokushesha uhlelo lokusebenza olulandwe kakhulu ezweni.
Ngesikhathi UBukele ujabule ngephrojekthi yakhe, abanye bakhathazekile ngezinto ezinjengokuguquguquka kwesimo se-bitcoin nokuphazamiseka okungakubangela ohlelweni lwezezimali lwanamuhla. Eqinisweni, yize amabhange amakhulu emhlabeni wonke asabela ku-bitcoin ngokumangazwa, ekuqaleni babemathintanyawo ukwamukela ama-cryptocurrensets ngenxa yesimo sabo esibi. Isibonelo, iBitcoin, ilahlekelwe ngaphezu kwenani layo ekuqaleni konyaka, ngemuva kokushaya irekhodi eliphakeme elingaphezu kwama- $ 60,000. Amanye ama-cryptocurrensets, athengiswa ngokungajwayelekile, ayashintshashintsha kakhulu, ehla enyuka njengama-sawaw.
Lokhu kuvame ukwenzeka ngokuya ngokuqagela noma ama-meme tweets avela ku-CEO kaTesla u-Elon Musk. Ukuphawula kwakho kuthonya kakhulu ukubaluleka kwalezi zinhlamvu zemali. Kodwa-ke, ukwanda kokuthandwa kwama-cryptocurrensets kuholele i-US Federal Reserve ukuthi ibe nentshisekelo enkulu emikhawulweni yedola lendabuko, ikakhulukazi uma kukhulunywa ngezinkokhelo nokudluliswa kwemali okungathatha izinsuku ezimbalwa. Ukuthengiselana kwe-Bitcoin kwenzeka cishe ngaso leso sikhathi. Ama-cryptocurrensets ayidingi i-akhawunti yasebhange. Zigcinwa kwizikhwama zedijithali.
Lokhu ingasiza abantu abavela emiphakathini empofu kakhulu, njengabaningi e-El Salvador, kodwa futhi nemiphakathi eyingcosana emazweni emhlabeni wonke, ukuze ikwazi ukufinyelela kangcono imali yayo. U-Lael Brainard, oyilungu le-US Federal Reserve Board of Governors, ngenyanga edlule ubambe iqhaza kwimali ephephile yedijithali, exhaswe yibhange elikhulu, engadala uhlelo lokukhokha olusebenza kahle futhi inwebise izinsizakalo zezezimali kubantu baseMelika. . I-China isivele ihlola leyo mali.
NgoMeyi, USihlalo weFederal Reserve uJerome Powell umemezele ukuthi ibhange elikhulu lizokhipha umqulu kuleli hlobo en echaza ukucabanga kwebhodi ngezinzuzo nezingozi ezihambisana nedola ledijithali laseMelika.
Yize ama-cryptocurrensets afana ne-bitcoin eyidijithali, imali yasebhange enkulu ingahluka ngokuyisisekelo kuma-cryptocurrensets amanje, ngoba isazolawulwa yibhange eliphakathi kunenethiwekhi yamakhompiyutha esetshenzisiwe. Yize ukuguquguquka kwesinye isikhathi kungaba yinzuzo, ukusetshenziswa kwamandla kuhlale kuyinkinga.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Izaziso » I-Bitcoin ingaba yithenda elisemthethweni e-El Salvador